Ku Kordhi Bixintaada Xirmada Xidhmada Xaqiijinta Diraha Suuqgeynta | Martech Zone
Ku Kordhi Bixintaada Xirmada Xidhmada Xaqiijinta Sayniska Suuqgeynta Cloud
Isniin, Disembar 28, 2020 Talaado, Disembar 29, 2020 Douglas Karr
Shirkadaha badankood ee diraya emaylku runti way dhayalsan karaan sida wax u gaarsiintu u saamayn karto ururkooda E-mayl qurux badan, si fiican loo dhisay, oo si aad ah waxtar u leh ayaa ku kici kara galka qashinka ee qof ka mid ah macaamiisha oo raba inuu beddelo shirkaddaada. Taasi waa xaalad aad u xun oo lagu jiro.
Xitaa ka sii darran, xitaa ma ogaan kartid in emaylkaaga loo maro qashin mooyaane adoo isticmaalaya an aaladda kormeerka sanduuqa. Taladayda tan ayaa ah la-hawlgalayaashayada 250ok, Kaas oo aan sidoo kale u adeegsado inuu ku ilaaliyo meelaynta sanduuqa. Waxay ku sameeyaan tan iyada oo la siinayo liiska miraha ka dibna la socdo sanduuqyadaas, ka dibna ay kuu soo sheegaan haddii e-maylkaagu u sameeyay iyo in kale mid kasta oo ka mid ah Adeeg Bixiye Internet oo weyn.
Sumcadda emaylkaaga waxaa saameyn ku yeelan kara dhowr arrimood, laakiin badankood waxay hoos ugu dhacaan shan arrimood:
qaabeynta - ma yihiin cinwaankaaga iyo emailkaaga serverka loo qaabeeyey si ISPs ay u xaqiijin karaan in emayllada ay si dhab ah uga imanayaan shirkaddaada?
List - cinwaanada emaylkaaga ma la cusbooneysiiyay, ansax ah, oo ma doorteen iimaylkaaga? Haddii kale, fursadaha in lagugu soo wargeliyo sida SPAM aad ayey u sarreeyaan
Aqoonsiga - IP dirista miyaa loo yaqaan ku dirista SPAM warbixinnada qashinka ah? Miyaa hore loogu qoray liiska madow?
mugga - ma waxaad diraysaa tiro emayl ah oo tiro badan? Iimaylka badan ayaa diraya gabi ahaanba kicinta kormeerka adag ee dirayaasha.
Content - ma leedahay calammo casaan leh eray bixinno aad ku isticmaalayso emaylkaaga? Miyaad diraysaa emayl badan oo leh URL xun, domains loo calaamadeeyay khayaanada, mise waxaa kaa maqan xiriir aan ka bixin cinwaannadaada?
Xirmada Aqoonsiga Diraya Suuqgeynta Cloud
Haddii aad diraysid in ka badan 250,000 emayl bishii iyo a Suuqgeynta Suuqa iibinta macmiilka, waa inaad gabi ahaanba maal gashataa xirmadooda Xaqiijinta Sender, taas oo ah qaabeyn adag oo lagu hubinayo inaad sare u qaaddo gudbinta farriimahaas sanduuqa. The Xirmada Aqoonsiga Dirayaha waxay bixisaa waxyaabaha soo socda:
Domain gaar loo leeyahay - Badeecadani waxay awood kuu siineysaa inaad sameyso isku hagaajin domain loo isticmaalo in lagu soo diro emayl. Degelkani wuxuu u dhaqmaa sidii Cinwaanka Cinwaanka emailkaaga. Suuqgeynta Suuqgeynta Suuqgeynta waxay xaqiijineysaa emaylkaaga diraya iyadoo la adeegsanayo Qaabdhismeedka Nidaamka Sender (SPF), Aqoonsiga Sender, iyo aqoonsiga DomainKeys / DKIM.
Cinwaanka IP-ga - Badeecadani waxay u xilsaartaa cinwaan IP ah oo u gaar ah koontadaada si sumcaddaadu ay adiga adigu u wada ahaato. Dhammaan farriimaha emaylka ee laga soo diray koontadaada adoo adeegsanaya Suuqgeynta Suuqgeyntu waxay adeegsadaan cinwaankan IP-ga. Cinwaanka IP-gu wuxuu u taagan yahay inta badan sumcaddaada dirista.
Jawaab Maareynta Boosta - Badeecadani waxay maamushaa jawaabaha aad ka hesho macaamiishaada. Waad u xilsaari kartaa shaandheeyeyaasha farriimaha xafiiska ka baxsan iyo codsiyada ka-noqoshada gacanta.
Intaa waxaa sii dheer, xirmada ayaa la socota Xisaabinta Xisaabta, halkaasoo Suuqgeynta Cloud ay kuugu calaamadeynayso koontadaada magaca aad dooratay ee la xaqiijiyay. Badeecadani waxay wax ka bedeshaa isku xidhka iyo isku duubista sawirka waxayna tirtiraysaa dhammaan tixraacyada Suuqgeynta Suuqgeynta iyada oo laga doorbido boggaaga la xaqiijiyay.
Video Xidhmada Xaqiijinta Dirayaha
Domain gaar loo leeyahay
Cinwaankaaga gaarka loo leeyahay wuxuu awood u siinayaa ISPs inay xaqiijiyaan sidoo kalena ay si wax ku ool ah ula xiriiraan arrimaha macaamiishaada adoo adeegsanaya wareejinta jawaab celinta. Xirmada Xaqiijinta Dirayaha, waxaad u baahan doontaa inaad sameysato DNS-kaaga si aad ugu suurtagasho xoogaa yar oo subdomain ah oo wax diraya iyo jawaab celin ah, iyo waliba furayaasha xaqiijinta. Iyadoo wefdi subdomain ah, sidoo kale loo yeedhay ergada aaga, waxaad kaliya u wareejineysaa qeyb ka mid ah domainkaaga hadda jira kuna wareejinaya 'Cloud Cloud' qayb ka mid ah qaabeynta boggaaga la xaqiijiyay Suuqgeynta Suuqgeynta kaliya waxay u isticmaashaa subdomain cayiman waxqabadyada ku habboon.
Si buuxda U qalma
@ muunad.domain.com MX Kuu ogolaanayaa emaylka diraya adoo adeegsanaya serverka Cloud Cloud
ka soo kabtaan soo kabasho.sample.domain.com MX Tracks emayllada ayaa diraya oo soo kabanaya
Jawaab jawaab.sample.example.com MX Waxay u ogolaataa Jawaab Maaraynta Maaraynta si ay ula tacaalaan miirayaasha horayna ugu soo gudbiyaan cinwaano gaar ah
baxo ka tag.sample.domain.com MX Waxay u ogolaataa macaamiisha inay ka baxaan rukunka
image sawir.sample.domain.com CNAME Dhibcaha suuqgeynta Cloud Cloud server
view eeg.sample.domain.com CNAME Qodobbada Suuqgeynta Suuqgeynta Muuqaal ahaan sidii server-yo Web Web ah
click dhagsii.sample.domain.com CNAME Dhibcaha Suuqgeynta Suuq Guji URL si aad ula socoto gujimaha
pages bogagga.sample.domain.com CNAME Dhibcaha Suuqgeynta 'Microrosite Suuq geynta' iyo serverka bogga soo degaya.
daruur daruur.sample.domain.com CNAME Dhibcaha suuqgeynta Cloud Cloud server server.
mta mta.sample.domain.com A Dhibcaha cinwaankaaga IP-ga ah
muunad.domain.com TXT Xaqiijiyaa DKIM iyo Xuliyaha DK
@ muunad.domain.com TXT SPF1 - Xaaladda SPF waxay awood u siineysaa martida soo kicinta ee aqoonsiga mfrom
ka soo kabtaan soo kabasho.sample.domain.com TXT SPF1 martigelinta soo kabashada
Jawaab jawaab.sample.domain.com TXT SPF1 martigelinta jawaabta
Xaqiiqdii waxaad ubaahantahay inaad hesho shahaado duurjoog ah SSL oo loogu talagalay boggaaga Suuqgeynta Suuqgeynta si aad sidoo kale uga faa'iideysato. Xisaabaadka lagu qaabeeyey SAP ee aan isticmaalin shahaado SSL waxay muujinayaan xayeysiin suuq geyn ah oo Cloud Cloud ah oo ku saabsan sifooyinka sawirada ee Dhismaha Mawduuca. Markaad sawirka ku darto emaylka, URL-ka tifaftiraha wuxuu muujinayaa qaabkaaga gaarka ah ee aasaasiga ah ee SAP. Isku xidhka nuqul ee ku yaal bogga muuqaalka muuqaalka ayaa nuqul ka dhigaya habka loo isticmaalo emaylka, bogagga degista, iyo biraawsarka.
Cinwaanka IP diirinta
Marka Xidhmada Xaqiijinta Dirayaha si buuxda loo qaabeeyo, cinwaanada IP-ga ee la dirayaa waa inay noqdaan kululaaday. Tan waxaa loo yaqaanaa IP kululaynta. Tani waa sababta oo ah ISPs sumcad kuma lahan cinwaankaaga IP. Haddii aad hadda uun bilowdo dirista wax kasta iyada oo loo marayo qaabeynta cusub, waxaa jirta khatar sare oo ah inaad xannibaadda ka horjoogsato. Inta badan isku xirnaanta cinwaanada cusub ee IP-ga waa isku dayga lagu soo dirayo spam aan la weydiin karin ama waraaqo kale oo aan loo baahnayn, sidaas darteed ISPs ayaa ka shakisan cinwaan cusub oo IP ah oo diraya mail.
Ma u baahan tahay gargaar? Aniga iyo asxaabteyda Highbridge waxay bilaabeen barnaamijkeenna, IP diiran, kaas oo nadiifiya xogtaada, mudnaanta siiya diristaada, wuxuuna ku siinayaa liisaska ololahaaga iyo jadwalkaaga si loo yareeyo khatar kasta oo la xiriirta arrimaha gudbinta iyo in la dardar geliyo sumcaddaada wax-soo-saar.
Douglas Karr, VP ee Highbridge
ISP-yada ugu waaweyn iyo bixiyeyaasha webmail waxay kugula talinayaan inaad ku dhisto sumcad dirid cinwaan kasta oo cusub oo IP ah adoo si tartiib tartiib ah iyo qaab ahaan ugu diraya cabbir yar, ka dibna si tartiib tartiib ah u kordhinaya muggaaga waraaqaha la jecel yahay ee adeegsadayaashooda. Sumcadan diraya waxaa lagu magacaabaa kululaynta or kor u kacaya cinwaankaaga cusub ee IP.
Hadafku waa in la dhiso qiyaastii 30 maalmood oo ah dirista taariikhda iyo xogta la jecel yahay si ISPs ay fikrad uga helaan boostada ka imaaneysa cinwaankaaga cusub ee IP. Muddada kor u qaadista waxay ku qaadan kartaa in ka badan 30 maalmood dirayaasha qaar iyo waqti ka gaaban kuwa kale. Waxyaabaha ay ka midka yihiin tirada guud ee liiskaaga, tayada liistada, iyo ka-qaybgalka macmiilku waxay saamayn ku yeelan karaan waqtiga ay ku qaadanayso cinwaankaaga IP-ga in si buuxda loo buuxiyo.
Suuqgeynta Suuqgeynta waxay kugula talineysaa inaad diirada saarto dirista macaamiishaada ugu firfircoon uguna mashquulsan inta lagu gudajiray waqtigan xasaasiga ah maadaama ay aasaas u noqon karto ISPs si loo go'aamiyo cinwaanada IP-gaaga dirista sumcadda. Ramp up waxay ku lug leedahay dirista tiro kooban oo fariimo ah maalintiiba IP-ga, sidaa darteed waxaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto in si dheeri ah loo hagaajiyo dhaqamada aad hadda u dirto iyadoo qayb ka ah howsha.
Haddii aad su'aalo qabtid ama u baahan tahay caawimaad xagga fulinta kormeerka sanduuqa ama aad u baahan tahay in lagaa caawiyo qaabeyntaada Xirmada Aqoonsiga Dirayaha, waxaad codsan kartaa caawimaad sameynta shirkaddeyda cusub, Highbridge. Waxaan nahay Iskaashato Istaraatiijiyad cusub waxaanna shaqadan u qabanay boqollaal hay'adood. Waxaan la shaqeyn karnaa wakiilkaaga Salesforce oo aan si buuxda kuugu qaabeyn karnaa, u kululeyn karnaa, oo aan kuugu soo diri karnaa waraaqo!
Tags: 250oksumadda koontadadomain caadadiisu tahayu heellan ipsamatabbixindns qaabeyntacalaamadeynta emaylkagaar ahaanhighbridgesumcadda ipip diiranip kululayntadaruuraha suuq geyntadomain gaar loo leeyahayka jawaab maareynta boostadaiibindheecaanXidhmada xaqiijinta dirahaemail sslkaarka sslergada aaga
IP Warm: Ku Dhis Sumcaddaada Cusub Codsigan kululaynta IP-ga